काठमाडौमा ग्यासको भीषण वि’ष्फोट : यसरी चेक नगरे हरेकको ख’तरामा [सेयर गरौँ] - media pati
काठमाडौमा ग्यासको भीषण वि’ष्फोट : यसरी चेक नगरे हरेकको ख’तरामा [सेयर गरौँ]
काठमाडौ । अचानक भएको वि’ष्फोटमा ठुलो क्षति भएको छ । काठमाडौंमा खाना पकाउने क्रममा ग्यास सिलिण्डर प’ड्किँदा एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । सिलिन्डर प’ड्किदा काठमाडौं–५ स्थित हाँडीगाउँ जोगी कुटी मार्गमा डेरा गरी बसेका व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका हुन् ।
भारतीय नागरिक १८ वर्षीय प्रदीपकुमार कुशवाह रहेको जानकारी दिइएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले दिएको जानकारी अनुसार घटना आइतबार राति भएको हो । उनको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा अहिले उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे आवश्यक थप अनुसन्धान जारी रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
ग्यास चुहिएको जांच गर्न कहिल्यै पनि सलाइको प्रयोग नगर्नुस् । सुरक्षित जाचको लागी हातको औला सिलीन्डरको मुखमा लगाउनुस् । यसले ग्यास लिक भए नभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
कपिलवस्तु कान्ड : ७ दिनपछि बाहिरियो कसैले नसोचेको रहस्य! मुख्य दोषीको भयो यस्तो प्रदाफास (भिडियो सहित)
१० वटा फाँ’सी दिने डोरी ध’माधम तयार गरिँदै, कस–कसलाई झु’ण्ड्याउने तयारी हुँदैछ ?
Previous Article कस्तो गज्जबको जागिर ? सुत्ने कामको तलब डेढ लाख
Next Article हेर्नुस भाइरल जोडी पुजाको ५ बर्षको छोरा , बिचरा ! भक्कानिदै भने आमा बुबा दुवैले छोडेर गए (भिडियो सहित)
सीमा विवादमा झुक्यो भारत, दियो यस्तो पहिलो प्रतिक्रिया
बहिनीको विवाहमा हिडेका दाजुको बाटैमा मृत्यु
अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी श्रीमती नेपाल आएर मानसिक त,नाब दिएपछि आ,त्म ह त्या बैनीले लेखिन मनछुने स्टाटस
कस्तो गज्जबको जागिर ? सुत्ने कामको तलब डेढ लाख
हेर्नुस भाइरल जोडी पुजाको ५ बर्षको छोरा , बिचरा ! भक्कानिदै भने आमा बुबा दुवैले छोडेर गए (भिडियो सहित)
Copyright © 2019 media pati.